Faah faahin laga helaayo baaritaankiii ku socday dilka loo geystay wasiir Cabaas Siraaji – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin laga helaayo baaritaankiii ku socday dilka loo geystay wasiir Cabaas Siraaji
Waxaa haatan faah faahin dheeraad ah laga helayaa baaritaankii ku socday kiiska dilka wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska Allaha u naxariistee Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji, kaas oo dhawaan lagu dilay afaafka hore xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Dilka wasiir Cabaas Siraaji ayaa waxaa ka dambeeyay mid ka mid ah illaalada hanti dhowraha guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale, waxaana wararka ugu dambeeyay ee soo baxaya ay sheegayaan in guddiga loo xil-saaray baaritaanka kiiskaasi ay soo ogaadeen arrimo dhowr ah oo ku xeernaa sidii uu dilka wasiirka u dhacay.
Hanti dhowraha guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa la sheegayaa inay illaalo u yihiin askar ka kala yimid ciidamado kala duwan oo aan boolis aheyn sida; kuwa asluubta iyo ciidamada cirka, waxaana askariga dilka u geystay wasiir Cabaas la sheegay inuu kiis kale hore ugu socday.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helaayo guddiga loo xil-saaray baaritaanka kiiskaan ayaa sheegaya in askarigaan dilka geystay uu bishii hore ee April ku lug yeeshay shil keenay in qorigiisii sharciga ahaa laga qaado, taasoo timid kadib markii gaariga hanti dhowraha guud ee Qaranka uu si qasab ah ku galay waddo xiran oo xilligaasi ay madaxda dowladda isticmaalayeen.
Askarigaan loo heysto dilka wasiirka ayaa la sheegayaa inuu xilligaasi qori ula baxay askartii illaalada aheyd, kadibna tallaabo adag laga qaaday, waxaana markaasi lagala wareegay qorigii sharciyeysnaa ee uu hore u heystay, waxaana markaasi kadib lagu soo oogay dacwad.
Hanti dhowraha guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa la sheegayaa in askarigaasi uu sii daayay, kadibna uu u dhiibay qori kale oo aan ahayn kii sharciyeysnaa ee uu hore u adeegsan jiray.
Askarigaasi ayaa haatan lugta la galay kiis kale, kadib markii uu toogasho ku dilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Allaha u naxariistee Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji, oo dhawaan aas qaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho.